Pejy 2 - 10 tsara indrindra WWE Smackdown ihany no mandoa vola isaky ny mijery - Wwe
10 tsara indrindra WWE Smackdown ihany no mandoa vola isaky ny mijery
Andro fitsarana # 9
Fandresena mendrika izany
Andro fitsaràna 2005 no nifarana ny vanim-potoana tsara ho an'ny Smackdown, nandritra ny roa taona farafaharatsiny. Smackdown dia nanana lisitra tena tsara hatramin'ny nanombohan'ny fanitarana marika hatramin'ny 2005.
tononkalo momba ny fahafatesan'ny olon-tiana
Somary voahitsaka ilay seho tamin'ny volavolan-dalàna 2005 raha ampitahaina amin'ny RAW, saingy mbola mendrika ihany ny lisitra. Nandritra ny taona ho avy dia ho very kintana maro kokoa izy ireo, noho izany ny Andro Fitsarana no fotoana farany indrindra nandritra ny roa taona izay Smackdown dia nanana lisitra nasiana karatra fandoavam-bola isaky ny mijery.
Ny ekipa tag vaovao an'i Johnny Nitro sy Joey Mercury, miaraka amin'ny mpitantana Melina, MNM, no nanokatra ny seho, niaro ny anaram-boninahitra Tag Team niaraka tamin'i Charlie Hass sy Hardcore Holly. Na dia ekipa natsipy miaraka aza i Hass sy Holly, dia lalao mandroso sy mahery setra ity nahagaga ny vahoaka ity. MNM no nandresy.
Niatrika ny Big Show i Carlito manaraka. Ho an'ny lehilahy lehibe vs matematika ombelahin-tongotry kanosa, mbola tsara ihany io. Iray amin'ireo lalao nanehoan'i Carlito fampanantenana be loatra sy henatra toy izany fa tsy nanararaotra izany i WWE. Carlito dia nibata ny fandresena taorian'ny nampiharan'ny mpampihatra azy Matt Morgan tamin'ny Big F tamin'ny F-5.
Ny Tompondakan'ny WWE Cruiserweight Paul London dia nitana ny anaram-boninahiny nanoloana an'i Chavo Guerrero tamin'ny lalao nahafinaritra.
ny fomba hiatrehana vady misento
Resin'i Booker T i Kurt Angle tamin'ny lalao tena tsara. Tena faly aho fa tsara izany satria ny fifanolanana dia tena nanelingelina an'i Kurt nanenjika an'i Sharmell vadin'ny Booker ho an'ny firaisana ara-nofo, anisan'izany ny fanolanana ary ny sary S&M. Soa ihany fa nifarana teto ny fifandirana.
Orlando Jordan dia nitana ny fiadiana ny tompondakan'i Etazonia tamin'i Jon Heidenreich tamin'ny lalao tsy misy ilana azy. Izany dia nanana ny mety ho ratsy kokoa noho izany, koa soa ihany fa nifarana tamin'ny marika dimy minitra.
Rey Mysterio dia nametaka an'i Eddie Guerrero tamin'ny lalao nampientam-po, ny zava-drehetra manomboka amin'ny psikolojia ka hatrany amin'ny tolona mat dia tonga eto. Nihodina tamin'ny fomba ofisialy i Guerrero taorian'ny lalao tamin'ny famonoana feno habibiana sy mahavariana an'i Rey.
Ny lalao tsara indrindra tamin'ny alina dia ny hetsika lehibe. Ny Tompondakan'i WWE John Cena dia nitana ny anaram-boninahiny noho ny JBL tamin'ny lalao I Quit mahery setra sy manaitaitra. Ity no lalao tolona lehibe voalohany nataon'i Cena hatramin'ny nifandonana teo amin'ny No Mercy 2003 niaraka tamin'i Kurt Angle.
tsy mankaleo namana tsy misy atao
tsy ataony priorité aho
inona no hatao rehefa eo amin'ny sambo ianao
"piloty" lexi pillman
fantatro fa tia ahy ity zazavavy ity